Zvinyorwa zvaLarry Alton pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Larry Alton
Larry mubatsiri akazvimirira webhizinesi anoongorora zvemagariro enhau, bhizinesi, uye bhizimusi. Mutevere pa Twitter uye LinkedIn.
Mabhizimusi epamhepo Anoda Kuchinja Kushambadzira Kuti Ugare Mberi
Chishanu, Mbudzi 8, 2013 Larry Alton
Iko hakuna mubvunzo kuti Internet yachinja zvakanyanya pamusoro pemakore, uye ichokwadi kuti makambani anotengesa sei bhizinesi ravo repamhepo zvakare. Chero chero muridzi webhizinesi anongoda kutarisa huwandu hweshanduko Google yaakaita kune yayo yekutsvaga algorithm kuti uwane kunzwisiswa kwekutanga kwekuti maratidziro eInternet maratidziro zvachinja sei nekufamba kwenguva. Makambani anoita bhizinesi paInternet anoda kusimudzira maitiro avo ekutengesa nguva dzese panenge paine shanduko
Muvhuro, October 7, 2013 Chitatu, December 17, 2014 Larry Alton
Zvishandiso zvakanakisa zvekushambadzira pamhepo zvinogara zvichichinja. Kuti urambe uchienderana nenguva, unofanirwa kuisa nzeve yako pasi, kutora maturusi matsva uye anoshanda kwazvo ekuvaka vateereri uye kushandurwa kwetraffic. SEO mabhurogi marongero anosimbisa kukosha kwe "chena ngowani" zvemukati uye kugovana, kuti iwe ugone kuwedzera mabhizinesi mablog, masimba masimba mawebhusaiti, uye Twitter kuti uvake rako redhijitari mbiri. Iyo Medium web app irikugadzira izvozvi
NeChishanu, Gumiguru 4, 2013 Larry Alton
Mukupera kwaNyamavhuvhu, Matt Cutts akatsanangura kuti Google inotarisa kumhanyisa saiti sechinhu chinowanikwa pawebhusaiti pane peji rekutsvaga. Muvhidhiyo yake yeWebmaster Help, akati: “Kana yako saiti iri, iri kunonoka, tataura kuti tinoshandisa kumhanyisa peji pamatanho edu. Uye saka zvese zvinhu zvakaenzana, ehe, saiti inogona kukwira kudzika. “Zvino, isu tinowanzorega kutaura nezvezvinhu nenzira
Mawebhusaiti Achiri Anogonesa Chitubu chePasive Mari
China, Gunyana 19, 2013 Chitatu, December 17, 2014 Larry Alton
Dai iwe waizotenda zvese zvaunoverenga, kutanga webhusaiti kuti uwane mari yekungoita ingangove yakarasika chikonzero mazuva ano. Avo vakasimbisa chitupa cherufu vanopomera makwikwi akakurisa uye Google inogadziridza sezvikonzero nei echinyakare kungoita mari, kuburikidza nekubatana kushambadzira, isisiri sosi inoshanda yekuita mari. Nekudaro, havazi vese vanoratidzika kunge vakagamuchira memo. Muchokwadi, kuchine vanhu vazhinji pawebhu avo
Guest Blogging - Uri Kuzviita zvisirizvo
Muvhuro, Nyamavhuvhu 26, 2013 Muvhuro, Nyamavhuvhu 26, 2013 Larry Alton
Pane imwe nguva, backlinks yaitonga nyika yekutsvaga injini optimization. Kana hunhu hwesaiti hwayerwa maererano nePejiRank, backlinks yakapa mavhoti akanyanya kutsvakwa aityaira metric iyi. Asi sezvo Google algorithm yakura, chinzvimbo chewebhu webhusaiti hachichakwanise kuzorora chete pahuwandu hwehukama hunonongedzera kwazviri. Iko kunaka kweiyo saiti inomisikidza iyo linki yakatanga kutakura huremu hwakawanda kupfuura huwandu hwakawanda hwekubatanidza saiti